SomaliaReport: Ciidamada Etoobia oo Lagu Arkay Belet-Weyne
By ABDI ABTIDOON 12/08/2011
Ciidamada Etoobiya iyo xoogaga Dawlada Ku Meel Gaarka Soomaaliay (DGKM) ayaa soo galay gobolka Hiiraan ee gobolada dhexe ee Soomaaliya iyagoo saldhigyo ka samaysanaya aaga degmada Beled-Weyne isu yiraarinta la dagaalanka al-Shabaab, dadka degaankuna soo tabiyeen in xaaladu kacsan tahay.
Goobjoogayaal ayaa Somalia Report u xaqiijiyey in boqolaal ciidamada Etoobiyaanka oo ay la socdaan ciidamada DKMG ayaa kasoo guuray isgoyska Kala Bayr ee xudduuda iyagoo 7km ujira Beled-Weyne.
"Ciidamada Etoobiyaanka iyo xooggaga DKMG oo wata toban gawaari hubaysan ayaa caawa saldhigyo ka sameystay meel degmada Beled-Weyne u dhow. Xaaladu wey kacsan tahay dadkuna waxay ka cabsi qabaan in dagaal culusi ka dillaaco labada dhinic," waxaa yiri qof degaanka degan oo codsaday inaan la magacaabin.
Saraakiil DKMG ayaa xaqiijiyey dhaqdhaqaaqa ciidamada waxayna soo jeediyeen in dagaal dhacayo.
"Waxaan meeshan la joognaa ciidamada Etoobiya si aan xagjirayaasha uga xoreyno degmada Beled-Weyne. Waxaan qorsheenaynaa weerarka belet-weyne iyo degmooyin kale inta waagu beryin," Maxamed Afeey Xirsi, sarkaal DKMG ayaa Somalia report u sheegay.
Degmada Beled-Weyne waa magaalo istaraateejig ah oo isku xirta koonfur iyo gobolada dhexe ee Soomaaliya.